Geedi socodka - Nantong Global Baako Products Co., Ltd.
Sida Aan Sameyno
Laga soo bilaabo ka qayb qaadashada cilmi baarista iyo fahamka macaamilka ilaa sameynta iyo sameynta wax soo saar badan, waxaan si taxaddar leh u daryeelnaa baakadkaaga.
Baakadaha ayaa ka badan ilaalinta sheyga; waa kanaal loogu talagalay astaantaada si ay ula xiriirto macaamiisheeda waxayna u adeegtaa sida qalab suuq geyn ah.Waxaan u maraynaa daraasad qoto dheer oo ku saabsan badeecada iyadoo lala kaashanayo macmiilka.
Sawir gacmeedka waxaa loo dhiibey kooxdeena naqshadeynta guriga oo leh khibrad isku dhafan oo warshadeed muddo ka badan 10 sano oo aqoon u leh dookhyada naqshadeynta dadyowga ee dalal badan. Dhamaadka, shaybaar muunad ah ayaa la soo saaray.
Daahfurka Wax soosaarka
Baakadaha molladaha ee oggolaanshaha nooca naqshadeynta, baakadaha ayaa sidoo kale lagu tijaabiyaa xooggeeda, bilicsanaanta, waxtarka iyo fududaanta adeegsiga. Ugu dambeyntiina, baakaduhu waxay u socdaan wax soo saar qaybtayada casriga ah ee wax soo saar, iyadoo loo hoggaansamayo tijaabooyinka tayada adag. Waxaan sidoo kale bixinnaa qaybinta ballaaran ee wax soo saarka soo-saarka ka dib.